News – NCA
Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka (HIQ) ayaa soo saartay warbixin sanadeedkii ugu horreeyay ee 2020-2021
Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka (HIQ) ayaa soo saartay warbixin sanadeedkii ugu horreeyay ee 2020-2021. Warbixinta waxay soo bandhigeysaa guulihii ay Hay’addu ka gaartay in la abuuro suuq isgaarsiineed oo uu tartan furan ka jiro, sahlayana in la maalgashto Isgaarsiinta iyo Tiknoolojiyadda. HIQ waxay diyaarisay shuruucdii Rukhsadaha Isgaarsiinta, waxayna bixisay rukhsadaha shirkadaha. Sidoo Kale, HIQ waxay dajisay shuruucdii lagu maamuli lahaa hirarka iyo lambarrada isgaarsiinta dalka, iyo isku-xirka Shirkadaha.
Warbixinta oo dhamestiran halkan ka aqriso: https://nca.gov.so/annual-reports/